Posted by Tranquillus | Jul 18, 2020 | Mipetraka sy miasa any Frantsa
Ny kaonty fanofanana manokana dia iray amin'ireo rafitra farany nampidirina ho ampahany amin'ny fanavaozana ny fiofanana arak'asa 2014, napetraka tamin'ny 1er Janoary 2015. Ny CPF dia ampiasaina hamatsy vola ny hetsika fanazaran-tena ho an'ny mpiasa sy ny mpikaroka amin'ny asa amin'ny hetsika ofisialy mahaleo tena. Ny antsipiriany bebe kokoa amin'ity lahatsoratra ity.
Famaritana ny kaonty fampiofanana manokana
Ny kaonty fampiofanana manokana na CPF dia rafitra iray voafehin'ny lalàna. Hamela anao hahazo tombony amin'ny zon'ny fampiofanana izany. Noho izany dia mikendry ny hanamafy orina ny fahaizanao, hihazona ny fampiasana anao ary hiantoka ny asa matihanina.
Marihina fa mbola afaka manome vola ny CPF ny mpisotro ronono iray raha toa ka manamafy ny zon'ny fisotroan-dronono rehetra izy. Tokony ho toy ny asa an-tsitrapo.
Marihina fa ny kaonty fampiofanana manokana dia nisolo ny Dingana Fampiofanana ho an'ny tena manokana na DIF, 1er Janoary 2015. Ny sisa amin'ny DIF sisa tsy lany dia azo afindra any amin'ny CPF.
Ny mpiasa rehetra izay mbola manana ny ora DIF sisa dia manana fe-potoana hatramin'ny 31 Desambra 2020 hanao fanambarana momba ny raharaha. Amin'izany fomba izany dia afaka izy ireo mitazona ny zony ary manohy mankafy izany tsy misy fanelingelenana na fetra voafetra. Mandritra ny fiasan'ny CPF vaovao, ny ora DIF dia hivadika ho euro.
Ireo mpandray anjara amin'ny kaonty fampiofanana manokana
Ny kaonty fanofanana manokana dia natao ho an'ny olona mihoatra ny 16 taona. Ny zaza 15 taona dia mety voakasik'izany koa raha nanao sonia fifanarahana am-pianarana.
Ho fampatsiahivana, manomboka amin'ny daty izay hanamafisanao ny zon'ny fisotroan-drononoinao. Hikatona ny kaontinao manokana. Io toetra manokana io dia manan-kery ho an'ny mpisoratra anarana rehetra, izay mety ho mpiasa, mpikambana ao amin'ny sehatry ny liberaly na asa miasa samirery, mpivady izay mpiara-miasa na mitady asa.
Ny mpiasa miasa an-tena dia afaka manana kaonty fiofanana manokana koa, nanomboka tamin'ny 1er Janoary 2018. Ny CPF-n'izy ireo dia omena mandritra ny enim-bolana voalohany amin'ny taona 2020.
Manontania kaonty fanofanana anao manokana: ahoana no hanaovana azy?
Raha te-hijery ny kaontiny manokana momba ny fanazaran-tena dia tsy maintsy miditra ao amin'ilay tranokala ofisialy fotsiny ilay olona montrompteformation.gouv.fr. Manana toerana manokana azo antoka izy ahafahany mamantatra ny tenany hiditra ao amin'ny kaontiny.
Ary koa, ity tranonkala ity dia manome fampahalalana momba ny fiofanana mendrika amin'ny CPF sy ny famatsiam-bola omena azy. Ireo tompon-kevitra dia hahita ihany koa ny fampahalalana rehetra momba azy, anisan'izany ny crédit euro amin'ny alàlan'ny kaontiny. Farany, hanana fidirana amin'ny serivisy nomerika mifandray amin'ny fanamafisana ny fahaiza-manao sy ny fitarihana amin'ny fiteny izy.
Kaonty fanofanana manokana: ahoana ny fomba hamatsiana azy?
Marihina fa ny tompon'andraikitra tsirairay dia manana kaonty voakarama amin'ny euros ary tsy ao anatin'ny ora intsony, manomboka amin'ny 1er Janoary 2019. Ilaina noho izany ny tatitra momba ny fiovam-po noho ny ora azony ary tsy lanina alohan'ity daty ity. Araka izany, tombana ho 15 euro isan'ora ny tombana.
Ary koa, ny olona iray dia afaka misoratra anarana amin'ny bola amin'ny euro amin'ny telovolana voalohany aorian'ny taona nahazoana azy. Ohatra, afaka manao izany izy mandritra ny telo volana voalohany amin'ny taona 2019 ho an'ny hetsika nataony nandritra ny taona 2018.
Mampiasà kaonty fampiofanana manokana
Na inona na inona manjo anao. Na miasa na mitady asa dia voarakitra an-euros ny zonao nahazoanao. Ianao irery no afaka manao fangatahana hanentanana azy ireo, ary ity, araka ny filàn'ny fampiofanana arak'asao. Eny tokoa, ireo zon'ny fanazaran-tena ireo dia azo ampiasana amin'ny alàlan'ny fanekena mazava momba ny tompona.
Momba ireo mpiasa manokana, dia manana ny zo tsy hampiasa ny crédit any amin'ny euro ianao. Tsy fanao ratsy ny matihanina. Na izany aza, raha manana ny iray amin'ireo lalam-piofanana omena ara-bola eo ambany CPF ianao. Ary io fiofanana io dia mitranga mandritra ny fotoana fiasanao. Tsy maintsy omena alalana amin'ny mpampiasa anao ianao.
Ny fangatahana dia tsy maintsy alefa farafahakeliny 60 andro alohan'ny datin'ny fiofanana. Raha mihoatra ny 6 volana ny faharetan'ny fivoriana dia tsy maintsy jerena ny fe-potoana farafahakeliny 120 andro. Avy eo dia manana 30 andro handinihana ny toe-draharaha ny mpampiasa ary hanaraka ny fangatahan'ny mpiasa. Ity fahazoan-dàlana manokana ity dia tsy ilaina amin'ny fiofanana ivelan'ny ora fiasana mahazatra.
Ho an'ny mpikaroka asa
Ny mpikaroka momba ny asa ihany koa dia miditra amin'ny kaonty fampiofanana manokana. Izy ireo dia tsy maintsy hifandray amin'ny pôle emploi mpanolotsaina ihany. Ny fiofanany dia afaka hamatsy ara-bola ny Faritra, Agefiph na Fikambanana fitantanana ny vola hividianana ny sembana, na i Pôle emploi aza. Ny kaontin'ny mpiasan'ny mpampiasa dia hodinihana arakaraka ny hetsika fanofanana natao. Na izany aza, ny vola dia tsy afaka mihoatra ny zo voasoratra ao amin'ny CPF.
Ho an'ny mpiasam-panjakana
Ny mpiasam-panjakana dia tsy maintsy mangataka fiofanana manokana. Na mandritra na ivelan'ny ora fiasana mahazatra. Ny fangatahana toy izany dia ekena hatrany raha toa ka mahafeno ny fepetra napetraka ary ny mpampiasa dia manana vola ara-bola ilaina. Ho fanampin'izany, ny mpandraharaha iray manao an'io fangatahana io dia hanana fotoana hahazoany tombontsoa amin'ny fanohanan'ny tena manokana hanampiana azy hivoatra sy hahatratrarana ny tanjony matihanina.
Ireo fiofanana azo ekena ho an'ny CPF
Maromaro ny karazam-piofanana ekena ho an'ny kaontin'ny olona fampiofanana. Ny fanombanana ny fahaiza-manao, ny hetsika natao hanamarinana ny traikefa azo raisina amin'ny 3° ny lahatsoratra L.6313-1, ary ny fanomanana ny fitsapana teorika momba ny fehezan-dalàna momba ny làlambe sy ny fitsapana azo ampiharina ny fahazoan-dàlana B sy ny an'ny fiara mavesatra dia ao aminy.
Misy ihany koa ny hetsika fanofanana omena ireo mpamorona sy mpaka orinasa ary koa fiofanana any ivelany araka ny fepetra voafaritry ny lahatsoratra L. 6323-6 amin'ny fehezan-dalàna momba ny asa.
Teo alohaFanavaozana ny Reconversion na fampiroboroboana ny fianarana momba ny asa (Pro-A).
manarakaFampandrosoana matihanina ho an'ny famolavolana matihanina-matihanina
Rafitra fahasalamana frantsay: fiarovana, vidiny, fanampiana